आज शनिवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७६ मंसिर २१ गते - Harekpal
आज शनिवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७६ मंसिर २१ गते
उपप्राध्यापक नारायणप्रसाद निरौला , ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद् २१ मंसिर २०७६, शनिबार ०१:११ मा प्रकाशित
श्रीगणेशायनमः ।। आज विक्रम संवत् २०७६ साल मंसिर महिनाका २१ गते शनिवार हो । सृष्टिदेखि हालसम्म १,९५,५८,८५१२० (एक अर्व, पञ्चानब्बे करोड अन्नठानब्बे लाख पचासीहजार १२०) वर्ष व्यतित भइसकेका छन् । कलिकालको ५१२० औँ वर्षअन्तर्गत श्रीशालिवाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, ईशवीय संवत् २०१९ अन्तर्गत परिधावी नामक संवत्सर चलिरहेको छ ।
सूर्य दक्षिणायनमा छन् । हेमन्तऋतुअन्तर्गत मार्गशीर्ष शुक्लपक्षको एकादशी तिथि अहोरात्र रहनेछ । यो महिनाका देवता केशव र मासदेवी विशालाक्षी हुन् । सूर्य वृश्चिक राशिमा छन् भने बृहस्पति धनु राशिमा छन् । रेवती नक्षत्र राति १।२३ बजेसम्म रहनेछन् । यसैगरी आज व्यतिपात योग र वणिज करण रहेको छ । आनन्दादिमा धाता योग रहेको छ । यसैगरी आज काठमाडौँमा सूर्योदय ६।४२ मा छ भने सूर्यास्त बेलुका ५।७ बजे हुनेछ ।
चन्द्रमा आज मीन राशिमा छन् । आज शनिवार शिवजीको उपासना शुभ रहनेछ । यसैगरी आज पिपलको स्पर्श एवं पूजा पनि लाभदायी रहनेछ । विशेषगरी हाल वृश्चिक, धनु, मकर राशिलाई शनि साँढेसाती र कन्या र वृष राशिलाई शनि अढैया रहेको छ । जसको शान्तिका निम्त आज ॐ शं शनिश्चराय नमः मन्त्र जप, पिपलमा जल अर्पण, शनिमृत्युञ्जयको पाठका साथै काला वस्तुको दान शुभ रहनेछ ।